Nhau - Chii chaunoda kuti utarise paunenge uchitenga blade ine barbed tambo fenzi?
Blade barbed waya fenzi chigadzirwa chekuchengetedza fenzi chinonyanya kushandiswa kutenderera nhandare. Nhare yakasungwa waya waya inoitwa yemhando yepamusoro yakadzika-kabhoni simbi waya kana aluminium magnesium chiwanikwa waya ne spray welding. Zvakanakira reza rakakomberedzwa waya waya iri nyore kwese chimiro, inyore kuisa uye nyore kutakura. Maumbirwo enhare inocheka waya akakodzera kuti ishandiswe munzvimbo dzine makomo nenzvimbo dzine materu mazhinji. Blade barbed waya fenzi inogamuchirwa zvakanyanya nevanhu nekuda kwemutengo wayo wepakati uye kugona kuita. Mupepeti anotevera anozivisa nzira yekutenga nendege Seine! Paunenge uchitenga blade barbed waya fenzi, vashandisi vanofanirwa kuteerera kune zvimwe zvirevo. Mupepeti akaronga matambudziko akati wandei anowanzoitika kana uchitenga blade tambo yakakoshwa guardrail. Ngatitarise!
Ndokumbira utarise kune anotevera mapoinzi paunenge uchitenga blade barbed tambo guardrail:
1. Mesh kukura kwemupendero barbed tambo guardrail. Saizi yeiyo grid inokanganisa zvakananga mhando nemutengo we blade barbed waya fenzi. Naizvozvo, kana uchitenga blade yakasungwa waya waya, iyo grid saizi ndiro dambudziko rekutanga kuyedzwa. Nekudaro, kana mukuru webasa asina kushomeka nemari, usatarise zvakanyanya nezvazvo.
2. Dhayamita yesimbi waya ye blade barbed tambo guardrail. Iyo dhayamita ye blade barbed waya fenzi inoenderana nehuwandu hwezvinhu zvinoshandiswa. Iyo zvakare yakakosha paramende inokanganisa mhando uye mutengo wefenzi. Zvinokurudzirwa kushandisa chishandiso kuyera hupamhi. Unogona kushandisa vernier caliper. Kana zvisiri, tenga imwe. Mushure mezvose, mutengo wayo unongova gumi nemaviri euan.
3. Zviyero zvezvimwe zvinhu. Hunhu hwesvo rakasungwa waya waya furemu zvakare chikamu chakakosha cheyese fenzi, inozokanganisa mutengo webasa rebarbed waya waya. Naizvozvo, panguva yekutenga, kureba, upamhi uye ukobvu hwezvinhu zvinoshandiswa kune iro banga rebarbed waya fenzi inofanirwa kuyedzwa, kunyanya kuyerwa kwehuremu, chinova chinhu chakakosha chinokanganisa mhando yeiyo blade barbed waya fenzi.
4. Surface yekupfeka mhando. Kazhinji, iyo nhandare yendege inoda kurapwa kwepamusoro kudzivirira ngura uye kuwedzera hupenyu hwebasa renhandare yendege. Kazhinji kupfeka kwe blade rakakomberedzwa waya guardrail kunosanganisira kunyorova, kupopera, galvanizing uye inopisa-dip galvanizing. Kunyangwe iwe ungasaziva ruzivo urwu, iwe unofanirwa kuziva zvakawanda nezve yakakosha pfungwa.
5. Kusiyanisa uye sarudza mhando yemakadhi ekuchengetedza. Muchengetedzo unogona kugoverwa mumhando dzakasiyana maererano nechinangwa. Mhando yakakodzera yekuchengetedza inogona kusarudzwa zvinoenderana nenzvimbo yekushandisa, uye mabharaki akasiyana ane mitengo yakasiyana. Musiyano wemutengo uchiri wakakura, saka tinofanirwa kusarudza zvinoenderana nerudzi rwatinoda.